Dab ka shakiyay Louisiana ayaa muujiyay ixtiraam la'aan kaniisadaha Baptist on Facebook - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Dab ka shakiyay Louisiana wuxuu ku nuuxnuuxsaday kaniisadaha Baptist on Facebook
Dab ka kacay magaalada Louisiana ayaa muujiyay naceybkiisa kaniisadaha Baptist on Facebook
Wax ka qabashada fariin on "cibaadaysi Afrikan," Matthews, magaca Noctis Matthews, ayaa sheegay in uu ma "adkaysan kari waayay oo dhan halkan Baabtiistyaasha, koox ka mid ah dadka soo gaaray Maskax bedel iyo isku dayaya in la helo ku faraxsan diinta lagu soo rogay awoowayaashood. sida ay ku dhacday miino. "
Farriintiisa, Matthews wuxuu rabay "in badan oo madow ah si uu u barto waxyaabaha uu aaminsan yahay ee Afrikaanka ka hor".
Aqoonyahanka, Nygyl Bryyn, ayaa xaqiijiyay xogta CNN iyo hindise magaciisu yahay Holden Matthews. Wuxuu sheegay in saaxiibkiisa uusan aheyn midab-takoor, wuxuuna u maleynayaa in kaniisadaha ay ahaayeen "dhibbanayaal xaalado".
Masuuliyiinta saddexda kaniisadood waxay sheeganayaan in Matthews gubay. Waxay ahaayeen kaniisado Baabtiis ah oo ku yaala wadnaha Cajun iyo Creole oo ku yaala Louisiana.
CNN waxay la soo xidhiidheen qareenka iyo qareenka xeer ilaaliyaha, laakiin weli lama helin jawaab. Markii ay CNN waydiisatay masuuliyiinta haddii ay ka warqabaan soo dirista, waxay muujiyeen in, sababta oo ah natiijada baaritaanka socda, ma faahfaahin doono wax gaar ah.
Inkasta oo ujeedadu weli tahay baaritaan, masuuliyiintu waxay sheegeen in xiisaha Matthews ee miyuusigga madow uu saamayn ku yeelan karo dabeecadiisa.
Birta madow waa nooc dabiici ah oo muusikada culus oo caadi ahaan wax ka qabta mucaaradka anti-Christian, shaydaanka iyo mawduucyada.
Sheekooyinka madow waxay badanaa leeyihiin xawaare degdeg ah oo ay ku jiraan voicing qaylada, guitars la jebiyey iyo dhismeyaal heeso aan caadi ahayn.
Sheeko ka timid kooxda la tuhunsan yahay, Pagan Carnage, waxaa loola jeedaa dabka kaniisadda.
Maalintii xigtay, bilayska ayaa ku dhawaaqay in Matthews uu gubay Kaniisadda Baptist Church ee Port Barre. Fiidiyoow ayaa lagu soo dhajiyay boggiisa kooxda YouTube ee cinwaankeedu yahay "Diabolical Riddle Feast".
"Kaniisada quduuska ah hadda waa la burburiyay," ayuu ku qayliyay Matthews gabayadii ugu dambeeyay ee heesta. "Ku gub magaca Odin."
Bryyn ayaa sheegay in Matthews uu qoray oo heesaya heesaha.
Sababta dabka ayaa wali lagu socdaa baaritaan waxaana mas'uuliyiinta fedraalku ay baarayaan in dembi nacayb loo geystay iyo in kale. Matthews ayaa lagu soo oogay saddex dacwadood oo gubasho ah dhismaha diineed.
Midawga Yurub wuxuu ka mid ahaa saddex kaniisadood oo madow ah oo ka tirsan kaniisadda miyiga ee St. Landry, galbeedka Baton Rouge, taas oo bilaysku sheegay in si ula kac ah loogu toogtay maalmo 10.
St. Mary's Church Baptist ee Port Barre, oo ku yaalla qiyaastii lix mayl koonfur bari ee Greater Union, ayaa la dhigay dab on March 26. Midawga Badan ee Baabtiisaha ayaa gubay Abriil 2. Kaniisada Boodhka Boodhka ah ayaa la gubay April 4.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.cnn.com/2019/04/12/us/louisiana-church-fires-suspect/index.html
Cameroon: Jean-Pierre Saah, oo ah muusikada saameynta iyo muranka dhalinyarada - JeuneAfrique.com